बढ्यो डलरको भाउ, कति छ अन्य देशको विनिमयदर ? [सूचीसहित] - Birgunj Sanjalबढ्यो डलरको भाउ, कति छ अन्य देशको विनिमयदर ? [सूचीसहित] - Birgunj Sanjalबढ्यो डलरको भाउ, कति छ अन्य देशको विनिमयदर ? [सूचीसहित] - Birgunj Sanjal
बढ्यो डलरको भाउ, कति छ अन्य देशको विनिमयदर ? [सूचीसहित]
२८ फाल्गुन २०७६, बुधबार ०७:२२
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको विनिमयदरका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ९० पैसा रहेको छ । मंगलबार डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ २४ पैसा र बिक्रीदर ११८ रुपैयाँ ८४ पैसा थियो ।